एनआरएन संघको ब्यापारी नेतृत्वले विज्ञ... :: सुजिता कार्की :: Setopati
एनआरएन संघको ब्यापारी नेतृत्वले विज्ञ सम्मेलन गर्ने
सेताेपाटी संवाददाता काठमाडौं, चैत २४
नेपालमा रहेका विज्ञसँग गैरआवासीय नेपाली विज्ञ र नेपालसँग जोडिएका विदेशी विज्ञको अन्तर्कृयाका लागि संघले आगामी अक्टोवर १२ र १३ मा काठमाडौंमा एक विशेषज्ञ सम्मेलन गर्ने भएको छ।
संघले हिजो शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक पत्रकार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सो जानकारी दिइएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघमा लामो समयदेखि विज्ञ सम्मेलनबारे चर्चा चल्दै आएको हो । विदेशमा ज्ञान आर्जन गरेर विविध कारणले परदेश मै रहीरहेका नेपालीहरूको ज्ञान र प्रज्ञालाई मातृभूमिको विकास र उत्थानमा सदुपयोग हुन सकोस् भन्ने भावना धेरै नेपालीमा भए पनि समन्वय र वस्तुनिष्ठ योजनाको अभावले यो केवल छिटफुट चर्चा मै सिमीत रहेको छ । बरू स्थापनाकालमा गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा सरिक रहेका विद्वानहरू क्रमशः आबद्धता टुटाउँदै लगे । एक्का दुक्का अपवादबाहेक नाम र ज्ञान भएकाहरू पाखा लागे । दाम र बदनाम भएकाहरू हाटहुट गर्न थाले। हाटहुटेहरूले संस्था भरिएपछि विद्वानहरू अट्ने कुरै भएन । संघको संस्थापन कालदेखि सक्रिय डा. सूर्य सुवेदीहरूले 'ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल (जीपीएफएन)' को स्थापना गरेर अर्कै अभियान रोजे । बेलायतको लीड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुबेदीको अध्यक्षतामा गठित समितिका सदस्यहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको हार्वाड विश्वविद्यालयलका प्राध्यापक डा. शिव गौतम, अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक (मुटुरोग विशेषज्ञ) डा. कुमुद धिताल, स्वीडेनको स्टकहोल्म विश्वविद्यालयलका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. कटक मल्ल तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको गोञ्जागा विश्वविद्यालयलका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. उपेन्द्रदेव आचार्य रहेका छन् । यस्तै अन्य विद्वानहरू पनि एनआरएन संघबाहिरै रहेर सक्रिय हुन चाहीरहेका बताइन्छ ।
संघको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय कमिटीहरू खल्तीमा अफिस राखेर चलिरहेका छन् र संघ प्रवासी नेपालीहरूको बाझाबाझ गर्ने फोरम बनेको छ। उपसमिति र टास्क फोर्सहरू गठन हुन्छन्, तर तिनको मिटीङ विरलै हुन्छ, काम त परको कुरा ! यो सब सुस्ती र नालायकीको निम्ति अरू कोही होइन संघभित्र कै मान्छेहरू जिम्मेवार छन्। पछिल्लो समयमा जो जस्ता मान्छेहरू संस्थामा हावी भएका छन् तिनले एनआरएन अभियानलाई फिक्का बनाएका हुन्। राष्ट्रिय कमिटीहरूमा तुच्छ गुटबन्दीको खेल पास गर्नेहरूले केन्द्रीय नेतृत्व भरिएको छ। एकाधबाहेक एनआरएनको नेतृत्वमा बस्नेहरूले एनआरएन संघको साख उकास्ने होइन, आफ्नो कमजोर प्रोफाइल उकास्न सफल भएका छन्।
यस्तैयस्तै मान्छेहरूले गर्दा संस्थाको ओज तेजोबध भएको हो र संघप्रति देशभित्र र बाहिरको आस्था धर्मराएको हो। कमजोर हैसियत भएकाहरूले संस्थागत र देश विकासका निम्ति आफूसँग प्रशस्त श्रोत, साधन, पुँजी, प्रविधि, भिजन र योजना छ भन्दा कसले पत्याउने? ज्ञान, विज्ञान र प्रज्ञाको कुरा गर्दा कसले विश्वास गर्ने ? फलतः एनआरएन अभियानमा विज्ञ सम्मेलनको चर्चा चल्दा खासै उत्साह जाग्न सकेको देखिँदैन।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २४, २०७४, ०१:००:३३